होटल मेरियटबाट प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले गरे धरहराको अवलोकन – Nepali Janata Khabar
होटल मेरियटबाट प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले गरे धरहराको अवलोकन
काठमाडौं – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बीच होटल मेरियटमा भेटवार्ता जारी छ ।
हिजो साँझ दुई घण्टा बढी कुराकानी गरेका ओली र नेपाल बीच अहिले पनि एक्लाएक्लै भेटवार्ता भइरहेको हो । भेटका क्रममा होटलबाटै धरहराको अवलोकन गरेको तस्वीर प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सार्वजनिक गरेका छन् ।
भेटघाट कक्षको झ्यालबाट सुन्धारामा नवनिर्मित धरहराको दृश्यावलोकन गर्नु हुँदै’, थापाले लेखेका छन्। धरहराको ११ वैशाखमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
यो पनि : काठमाडौं – नेकपा एमालेको कार्यालय थापाथलीबाट प्रहरीले बालिका खड्कालाई पक्राउ गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका नेता पार्टी कार्यालय निरीक्षणमा गएको बेला गाली गर्न थालेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालले देशभर नयाँ पार्टी खोलेर हिँडेको खुलासा गरेका छन् ।
बिहिबारनेपाल सँग २ घण्टा लामो वार्ता गरेका ओलीले नेपाल समूहले पार्टीमा उपद्रो गर्दै आएपनि भरसक अहिले पनि आफूहरु सम्झाउने प्रयासमा रहेको बताए ।
हाम्राविरुद्ध कति गरे ? तर अहिले उनीहरुले यति उपद्रो गर्दा पनि, अर्को पार्टी देशभर खोलेर हिँड्दा पनि, अहिलेसम्म हामीले कारबाही नगरेर सम्झाइबुझाइ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।
बिहीबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भने, ‘अहिले पनि हाम्रो प्रयास सम्झाउनीमा छ, सच्याउनेमा छ ।
अहिले पनि भरसक पार्टीमा क्षति नहोस् भन्ने छ । पार्टीमा अनुशासनहीनता चल्ने नभन्दै ओलीले अनुशासनहीनता र अराजकतासँग कुनैपनि हालतमा सम्झौता हुन नसक्ने बताए ।
पार्टी विरोधी र गुटगत गतिविधिमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता हुन सक्दैन’, व्यक्तिगत तबरमा कुराकानी हुनसक्ने भए पनि अब पार्टीभित्र गुटगत गतिविधि चल्दैन ।
पार्टीकै नाउमा पार्टीभित्रबाट कहीँ फ्लोर क्रस गर्ने, नेपालको संसदीय आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय इतिहासमा यति साह्रो अराजक, यस्तो दृश्य कहीँ कतै पनि देखिएको छैन’ बिहीबार नेपाल कम्युनिस्ट
यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध पार्टी जुधिरहेको भन्दै ओलीले विगतमा आफूहरुलाई पार्टी विहीन बनाउने खोजिएको भन्दै त्यो प्रयास असफल भएको पनि बताए ।
पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भने, ‘बरु अलग भएका छन्, पार्टीभित्रै बस्ने, अनुशासनहीन काम गर्ने, फ्लोर क्रस गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई गर्व गरेका छन् ।
ओलीले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड (हाल माओवादी केन्द्र अध्यक्ष) र वरिष्ठ नेता नेपालले आफूलाई ‘टाउकोमा हानेर रन्थन्याउने नीति’ लिएको भन्दै कटाक्ष गरे ।
प्रचण्ड र नेपालहरुमा चरम महत्त्वकांक्षा​ र संकीर्ण मानसिकताले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाउने दुष्प्रयास भएको पनि स्मरण गरे ।
आफू ५६ सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै कठीन परिस्थितिमा आन्दोलनलाई माथि उठाउन भूमिका निर्वाह गरेकाले कसैले कथित कारबाही गर्दैमा हट्ने कुरा नहुने बताए ।
ओलीले भने, ‘म ५६ वर्ष अगाडिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको छु, ५० वर्ष अगाडि एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु गरेर लागेको छु । तर ममाथिबाट हमला सुरु भयो ।
हमला पनि यस्तो भयो कि साधारण सदस्यबाटै निष्काशन गरियो । उनले अगाडि थपे, ‘उद्घोष थियो केपी ओलीलाई पत्तासाफ बनाइयो, भित्तामा टँसाइदिन्छु । धूलोमा मिलाइदिन्छु । धूलोमा मिलाए ।
ममाथि किन त्यस्तो आक्रमण थियो भने टाउकोमा हान्ने हो भने शरीर सग्लै भए पनि रन्थनिने भयो नि । त्यसरी टाउकोमा हान्ने नीति उनीहरुमा रह्यो र नेतृत्वदेखि शीर्ष नेतालाई कारबाहीमा पारियो ।
नेकपा एमालेको कार्यालय थापाथलीबाट बालिका खड्का प क्रा उ : बालिका प क्रा उ पर्नुको कारण यस्तो छ । ….
पाँचसय वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति यसरी फेला, बेवास्ता नगरी? पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं मनले चिताएको पूरा हुने छ ॐॐॐॐ